Qeybta:Dayactir Saddex-bilood ah3 min akhris
Dhammaanteen waxaan dooneynaa in aan ka tagno caruurteena iyo carruurteyda si amaan ah, caafimaad leh, iyo kuwo firfircoon Minnesota. Haddii aan ku noolnahay magaalo weyn ama magaalo yar, waxaan xaqiijin karnaa hawo nadiif ah iyo biyo haddii aynu la wada shaqeyno deriskeena, milkiilayaasha ganacsatada, iyo hoggaamiyeyaasha xukuumadda si ay u dalbadaan beddel dhaqaale tamar nadiif ah.
Kaaliyeyaasha aan ka muuqanno rubucaankan waxay ku dadaalayaan inay abuuraan isbahaysigan midaysan. Barnaamijka McKnight Foundation ee barnaamijka Midwest Climate & Energy wuxuu kobciyaa oo taageeraa hoggaaminta cimilada iyo tamarta ee gobollada Dhexe. Waxay ka shaqaysaa yareynta tamarta dabaysha korontada ku xiran si loo ilaaliyo tayada nolosheena iyo inaan kor ugu qaadno gobolkeena tusaale ahaan adduunka.
Qeybta afaraad ee McKnight ee 2018, guddiga ayaa abaalmarin ku siiyay 198 deeqda $ 29.8 million. Lacagtaasi waxay ahayd $ 3.3 milyan doollar oo deeq bixiyayaal ah oo taageera barnaamijka Midwest Climate & Energy. Waxaan caddeyneynaa saddexda barnaamijyada cimilada ee tamarta iyo tamarta hoos ku xusan. Liiska buuxa ee deeqaha la aqbalay ayaa laga helayaa noo keydka macluumaadka.
"Ku shaqeynta isbeddelka cimilada waxay u baahan tahay 'qof kasta oo ku jira' istaraatijiyad. Qaar ka mid ah deeq bixiyeyaashu waxay ka kooban yihiin kooxo kala duwan oo ka shaqeeya qeybaha kala duwan si ay u nadiifiyaan nadiifinta tamarta qof kasta oo ku sugan gobolka. " -LANDRIGA LANDESMAN, SIDA LAGU QAADO
Yolanda iyo Akira Minneapolis iyo Olivia ee Waconia waxay arkeen sida hawo wasakheynta ay saameyn xun ku yeelatay xaafadooda iyo meelaha dabiiciga ah ee ay jecel yihiin. Waxay ku hadlaan caddaalad cimilada ah iyada oo loo marayo ololaha 100%. Sawirka sawirka: Susan White
Qaadashada Minnesota helay $ 400,000 in ka badan 12 bilood. Qaadashada ayaa dhawaan bilaabay 100% OlolahaImtixaanku wuxuu u hoggaansamayaa habka ujeedada nidaamka tamarta, kaas oo ka mid ah beddelidda siyaasadda tamarta, hagaajinta jinsiga iyo sinnaanta jinsiga, abuurista shaqooyinka joogtada ah, iyo taageeridda kala-jiidashada bulshada ee ku-meel-gaadhka ah mustaqbalka leh tamar nadiif ah.
Isbahaysiga Horumarinta Joogtada ah ee Minnesota ee Iskuduwaha Deegaanka, koox ka kooban 30 shirkadood oo hogaaminaya wadista talaabada tamarta nadiifka ah ee Minnesota, ayaa heshay $300,000 muddo labo sano ah. Iyadoo lagu kobcinayo hogaaminta qaybta ganacsiga, isbahaysiga ayaa ujeedkiisu yahay in la aqoonsado siyaabaha lagu yareeyo caqabadaha sharciyeynta iyo in la qaato fursadaha siyaasadeed ee gobolka oo dhan. Taageerada McKnight waxay xubnaha u dhaqaajin doontaa yoolka ay ka leeyihiin dhaqaalaha gobolka ee ku shaqeeya boqolkiiba boqol tamar nadiif ah.
Qalabkan korontada (EV) waxaa lagu soo oogaa waxa loo yaqaan "fiilo ficil ah." Qorraxda oo dhan, waxay u isticmaashaa tamarta qorraxda si ay u soo qaadato ilaa saddex gaadhi iyo waxay kor u qaadi kartaa heerka cabsida haddii ay daruurtu si ku meel gaar ah u saarto wax soo saarka qoraxda. Waa qayb ka mid ah tijaabin qaran si aad u baratid sida EVS iyo tamarta qorraxda uga faa'iideysan karto fiilada korantada.
Intaa waxaa dheer, Machadka Great Plains, oo taageera dadaalka tamarta nadiifka ah ee heerarka degmo, helay $ 320,000 muddo 18 bilood ah. Machadka wuxuu ka shaqeeyaa bulshooyinka magaalooyinka iyo miyiga ah si loo helo ficil siman oo ku saabsan tamar nadiif ah iyo jawi sida istaandarka dhammaan magaalooyinka Minnesota.
"Ku shaqeynta isbeddelka cimilada waxay u baahan tahay 'qof walba' istaraatijiyad," ayuu yiri Debby Landesman, guddoomiyaha guddiga McKnight. "Bisha koobaad ee deeq bixiyayaashu waxay ka kooban yihiin kooxo kala duwan oo ka shaqeeya qaybaha si ay u nadiifiyaan tamarta qof kasta oo ku sugan gobolka."
Warka kale, horay isbeddelka shaqaalaha ku dhawaaqay waaxda maaliyada ayaa dhaqan galisay 1-dii Janaayo. Therese Casey, hadda kantaroole, waa agaasimaha dhaqaalaha. Intaa waxaa dheer, Elizabeth McGeveran, Agaasimaha saameynta barnaamijka maal-gashiga, waa agaasimaha maal-galinta, meel cusub oo la abuuray oo loogu talagalay in lagu hormariyo ballanqaadka McKnight si uu u adeegsado kaalintiisa maalgaliye hay'adeed oo loogu talagalay saameynta maareynta.
Warbixinta, Khayraadka Webka Ogosto 2021
Astaamaha Ben Passer Luulyo 2021